Nyochaa: Chineke nke Obere Ihe, nke Arundhati Roy | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nyochaa: Chineke nke Obere Ihe, nke Arundhati Roy dere
Ọ bụrụ na m ga-ahọrọ akwụkwọ, m ga-arapara na nke a, nke m gụghachiri na ihe karịrị otu oge ma ọ na-ejikwa mee ka m nwee mmetụta dị iche iche. Gịnị mere ha ji mee otú ahụ? India, ihe atụ ole na ole nke na-agaghị akarị, akụkọ dị mfe mana juputara nuances na ihe odide ọjọọ, na-ata ahụhụ n'etiti paradaịs. Taa ka m wetara nyochaa nke Chineke nke obere ihe site n’aka Arundathi Roy, afọ 100 kachasị nke India.
1 N’otu obodo dị n’India. . .
2 Ebube nke paradaịs nsogbu
3 Ọ bụ onye ode akwụkwọ maara ihe
N’otu obodo dị n’India. . .
Kerala, steeti India ebe edere akwụkwọ akụkọ a.
E debere chi nke obere ihe n’obodo Ayemenem, nke na-adịghị anya site na obodo Kottayam, na steeti ndịda India nke Kerala. Otu ebe anyị nwere ike ịgụta dị ka onye ọzọ na-akwado akụkọ ahụ ebe ọ bụ na, dị ka aha akwụkwọ akụkọ ahụ na-ekwu, obere ihe ndị a mụrụ na ebe a na-eme ka ụzọ iche echiche, evolushọn na ọbụna ọdịnihu nke ndị na-akwado ya.
Akwụkwọ akụkọ ahụ malitere na 1993, mgbe Rahel, 31, laghachiri obodo iji zute nwanne ya ejima, Estha. Site mgbe ahụ gawa, akụkọ a laghachiri na 1969, afọ nke ndụ ya gbanwere ruo mgbe ebighi ebi, yana nke ezinụlọ ya, Saga-Ọtọdọks nke saga bi na Kerala. Akwụkwọ akụkọ a na-aga njem oge niile iji kọọ ndụ Pappachi na Mammachi, nne na nna ochie ahụ, ọ bụ ọkà mmụta sayensị na ọ bụ isi nke ụlọ ọrụ Coservas y Encurtidos Paraíso.
N'oge na-adịghị anya, anyị hụrụ akụkọ banyere ụmụ ya, Ammu, nwanyị a eti eti nke laghachiri n'ụlọ nne na nna ya na ụmụ ya abụọ - Rahel na Estha -, na Chacko, nwanne nwoke onye mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na Oxford lụrụ nwanyị Bekee, Margaret, ya na onye nwere nwa ya nwanyi Sophie Moll.
Moll bụ onye bụ isi na akwụkwọ ahụ, dịka ọ ga-abụ n'oge ọ gara ala nna ya na mmekọrịta ya na Rahel na Estha na-eduga na ihe omume dị egwu nke azụmahịa a na-agwụbeghị, nsogbu na olileanya nke ndị ọzọ fọdụrụ n'ezinụlọ yiri ka ha jikọtara. ...
Ebube nke paradaịs nsogbu
Chi nke obere ihe na - eri nri nke anwansị nke onye dere ya jụrụ ajụ mana onye ya doro anya n’akwụkwọ niile. Nkọwa ya na ihe atụ ya na-egosipụta echiche ọhụrụ nke naanị ịtụgharị uche nwere ike ijide, yana ya, echiche efu nke ụwa nke na-adịghị ka ọ maara obere ihe ndị a.
Agbanyeghi na okwu ichoro na-ebelata uda nke akuko a, n’ime akwukwo a ha na-akwalite ya, soro omume nke ndi odide a ma mee ya ihe puru iche, na-enwe ike ibanye n’ime ihe ha mere, na Ammu onye ya na nwoke gbara oji bi n’ime ya gootu, na Pappachi nke onye nru ububa ya ka na-ada. . . Onye ọ bụla n'ime ihe odide ahụ yiri ka ọ na-agba egwu na ike akụkọ ahụ nke na-abụghị naanị ihe odide ahụ, kamakwa gburugburu ebe obibi paradaịs na-atụ ụjọ dị ka Kerala, bụ ndị ndị njem njem meriri ebe ha na-eme njem abalị, ebe ikpere na ndị akaebe na-akwado abalị ahụ. onye iwe ahụ hụrụ oke okwute ojii ndị na-adabere na mango na-egbu maramara. Ihe niile na-atọ ụtọ anaghị adabara, ee, maka palate niile.
Dika akwukwo ohuru n’aga n’ihu, karisia n’ime uzo ato ikpeazu nke akwukwo a, “ihe nta ndia” di ihe di nkpa, ihe bidoro dika itughari uche na aghota ihe di iche, nwe obi enyo na, dika umuaka ahu, o dupuru anyi na ala mmiri mkpebi ikpeazụ nke nsonaazụ ya agaghị atọ mmadụ niile ụtọ.
Ọ bụ onye ode akwụkwọ maara ihe
Onye edemede nke Chineke nke Obere Ihe, Arundhati RoyỌ chepụtara akwụkwọ a mgbe ọ rụchara ọrụ afọ anọ, n'agbanyeghị na o mesiri obi ike n'oge ọzọ na ọ were ya ndụ ya niile ide ya. Onye edemede ahụ, nke a mụrụ na Kerala ma bụrụ onye ezinụlọ nke Syria-Christian, tolitere na paradaịs ahụ nke ahịhịa na-agafe ma na-ahụ anya anya osisi aki oyibo, otu ihe ahụ nke komunizim ma ọ bụ nke ndị caste, ga-enwe nsogbu. ma ọ bụ ndị ọzọ bi na India dabere na agbụrụ ha na, ya mere, ọrụ ha na ọha mmadụ.
Emechara na 1996 ma bipụta ya na 1997, Chineke nke obere ihe bụ onye kacha ahịa, ọkachasị mgbe enyere onye edemede ahụ akwụkwọ Bookers onyinye n’otu afọ. Nke a bụ naanị akwụkwọ akụkọ Roy, onye edemede edemede, onye edemede na onye mmegide sitere na mpaghara India nke ikpe na-ezighị ezi ọ gbachitere kemgbe ọtụtụ iri afọ.
Nke a nyocha nke Chineke nke Obere Ihe site n'aka Arundhati Roy gbalịa ichikota ihe bụ isi nke otu n’ime akwụkwọ ndị a kacha atụ aro banyere akwụkwọ ndị India n'oge a. Na-emetụta ya James ọrịre, Salman Rushdie ma ọ bụ anyị ga-ekwu na ụfọdụ ndị Latin America na-ede akwụkwọ na-amasị Gabriel García Márquez, Roy na-ebuga anyị site na ndịda nke India ebe iwe ochie, mgbanwe ọhụrụ na ọdịnihu a na-apụghị ịgbagha agbagha gbakọtara n'okpuru abalị ndị ahụ doro anya na enweghị ndepụta iji nye anyị oriri maka uche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nyochaa: Chineke nke Obere Ihe, nke Arundhati Roy dere
Akwụkwọ 3 maka ndị owu na-ama